उमेर, कपाल र रन्काहरु
"हेर त्यो कपाल!!" आमा कराउन थाल्नुभो ।
"काट् त, ए काटिहाल्!! कती फोहोरी देख्खेको हो ।भर्खर गाँजा तानेर आएजस्तो!!" थप्दै हुनुहुन्थ्यो ।
"ह्या आमा, रहर लाग्यो त क गर्नु, नाइ पाल्ने हो पुरै, कपाल बानेर हिँड्ने हो ।" दिएँ मैले नि ।
"कस्तो नबुझेको होला, अनुहार हेर त । कती बैरागी देख्खेछ, ब्या गर्ने बेलामा नि ।" अझै कराउँदै थिइन् बुढी ।
बहिनी आइपुगी ।
"हो तनि, हि.... दाइ, केटिहरु नि भाग्छन के हजुर लाई देखेर । छ्या छ्या त्यो कपाल ।" कुर्लिन थाली त्यो पनि ।
एकैछिनमा नारा बाजी नै हुन थाल्यो । काका, काकि, छिमेकी अंकल अन्टि, भाईहरु, सबै थपिन थाले । ज्ञानेन्द्र जस्तो फील भैराथ्यो, जनान्दोलन २०६३ ।६४ ताकाको । डन्डा लिएर पुलिस आउन मात्र बाँकी थ्यो ।
तेसै हार मान्ने वाला त म छैन, कपाल नकाट्ने ढृढ संकल्पमा अटल रहँदै एक दुइ दिनमा फुत्केर काठमाडौं फर्किएँ । राजा हो र म, आन्दोलन देखेर तर्सिने ? जस्ट किडिङ् !!
हेर्नोस्, यो २४ कटेसी बहुत कठिन कोइ कोइ ठिटाहरुलाई । पैले इस्कुल्मा सरहरुले ठोक्छन् भनेर कपाल पाल्न पाइएन, अब अहिले केटिहरु भाग्छन् रे भनेर । तेती मात्र कहाँ हो र, बल्लतल्ल ब्यचेलोर सकेर एसो गोडा दुइ एक पैसो हात पर्न के थालेथ्यो, "अब त बेला भयो त, खोजेर राखेछस् कि हाम्ले खोज्नी हो ?" जस्ता नेपाली बिसयमा आउने लामो प्रश्न भन्दा नि गाह्रा कोईश्चन आउन थाल्छन् । छु भनम् भने, तेइ भएर दुब्लाको भन्लान् भन्ने पिर्, अब छैन भनम् भने ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरिले नै स्विकार नगर्ला भन्ने त्रास् । लौ हेर्नोस् त, नखाम् भने दिनभरिको सिकार, खाम त भने कान्छा बाबुको अनुहार ।
अर्को फेरी बहुतै मिठो खुल्दुली हुन्छ कसैको । "अब त रहर लाग्ने बेला भयो त केटो, मायाको फील गर्न परो, रमाउन परो नि उमेर छँदै ।" कुन्नी कता गर्नी हैच कुन्नी फील्, उता साइँला साइँली ४० कटेसी रमाउने भनिराछन्, मलाई के हतार २४ मै । तर गाह्रो छ हनुमान जि, गाह्रो छ ।
आजकल त काठमाडौंबाट त्यहिँ पल्तिर चितवन घर जाँदा नि अष्ट्रेलियाबाट फर्केको मान्छेझैँ लाग्छ । सबको डिमान्ड बाफ्रे । भाई बहिनिहरुलाई भाउजु, हजुरबा हजुर आमालाई नातीनी बुहारी, बाआमालाई बुहारी । सब भन्दा एक्स्साइटेड र डिमान्डिङ् त छिमेकी आन्टिहरु, मानौँ कि म साँच्चिकै अष्ट्रेलिया बाट सुट्केस का सुट्केस आईफोन र आइप्याड ल्याउँदै छु ।
आफुलाई यहाँ कैले कपाल लामो होला र जोन स्नो जस्तै लूक्स लिएर ट्याक ट्याक बाटो हिनम्ला जस्तो भैराछ ।
[PatanDhoka, Baisakh 1st 2076(April 14th 2019)]